Ukufumanisa okungalunganga nokulungisa | News24
Ukufumanisa okungalunganga nokulungisa
: UMLILO EST FRANCIS: Umasipala ulwa ezinkundleni nomba omayelana nomlilo owawugqogqisa kwiikanala zaseSt Francis ngo-2012. IFOTO: eni’kezelwe
UKUSUSELA mhla sathatha iKouga ngo-August ka-2016, siye safumana ukuba kukho inani lamabango emali kwakunye nemiba yokungangqamani nemithetho elawula ezemali, zinto ezo ezijinga phezu komasipala njengelifu elimnyama.
1. Ityala elidala kwiSebe Lezothutho
Umasipala uye wafeda ukuhlawula Isebe Lezothuthu iimali zeelayisenisi zokuqhuba isithuba seminyaka phantshi kolawulo lwamaBhunga angaphambili. Ngelixa lonyulo lwango-2016, ityala belime kwi-R11 million. Siyayihlawula le mali ngokwezicwangciso esizenze neSebe.
2. Ityala le-R46 million kuMasipala oMbaxa iNelson Mandela Bay
Emva konyulo, iBhunga elitsha lothuswe kukufumanisa ukuba uMasipala oMbaxa iNelson Mandela Bay iye yathi nka iKouga ngetyala lamanzi eliyi R46 million. Oku kuphezu kwetyala lanyanga nenyanga. NgokwaloMasipala uMbaxa, iKouga ibisoloko ihlawuliswa kancinane ngokusebenzisa kwayo amanzi phakathi ko-2012 no-2016. Eli tyala lithiwe thaca ngo-May ka-2016, kodwa lafihlwa liBhunga langaphambili. Iingxoxo phakathi kwabamasipala ziyaqhuba.
3. Ityala lenkundla malunga nomlilo owatshisa ngo-2012 eSt Francis Bay
Ityala lenkundla umasipala aqubisana nalo lingatyabula umasipala into ephakathi kwe-R30 million neR40-million. Eli bango lisusela kumlilo wango-2012, nowathi watshabalalisa inani lezindlu kummandla weekanala eSt Francis Bay.
4. Ityala le-R13 million kwiSebe Lezemisebenzi
NgoJuly ka-2017 iBhunga liye lagagana nelinye ityala elothusayo. Eli tyala lineminyaka elishumi, neliyi-R12,62 million, lisusela ekungahlawulweni kwemali yembuyekezo yabasebenzi neyaziwa njenge “workman’s compensation”.
Umasipala ebengayihlawuli le mali ukususela ngo-2007 ukuya ngo-2016. Oku kuye kwathetha ukuba abasebenzi bebengalungiselelwanga nkxaso-mali efanelekileyo, iminyaka elishumi yonke, ukuba bebenokuthi bonzakale.
Umasipala ngoku wenze izicwangciso neSebe ukuba lenkxaso-mali iphinde imiselwe, kwaye kuyaxoxwa malunga netyala.
5. UNothimba weNkundla
Umasipala ulahlwe ngamatyala amaninzi abekwe ngabasebenzi abangaxolanga phambi ko-August ka-2016, kodwa wafeda ekuhlawuleni oko kugwetyelwe aba basebenzi.
Ngenxa yoko, kuye kwanyanzeleka ukuba siqubisane namabango amadala abasebenzi kulo nyaka udlulileyo. Kwelinye icala umasipala uphantse waphulukana neenqwelo zakhe ezisithoba ngenxa yoku kufeda.
Nge-19 ka-July uNothimba weNkundla uye wafika kwiziko leemoto likamasipala eze kuthimba isigadla kwakunye neebhaki ezisibhozo, malunga nomgqaliselo wenkundla ogwebele abasebenzi ababini abathe bamoyisa umasipala kwityala labo ngo-2115. INkundla Yezemisebenzi ibagwebele, kodwa zange kubekho ntlawulo.
Umasipala kuye kwanyanzeleka ahlawule i-R152 000 ukunqanda ukuba ezi nqwelo zingathathwa. Le mali ibandakanye leyo igwetyelwe abasebenzi kwakunye neendleko zenkundla.
6. Ukufeda ukuhlawula amatyala phakathi kweentsuku ezingama-30
Kungumthetho ukuba umasipala ahlawule bonke abo abatyalayo phakathi kweentsuku ezingama-30, nto leyo ebingenzeki eKouga phantsi kweBhunga langaphambili
Ukuphucula ukubakho kwemali kwamasipala ukuze bahlawuleke abo batyalwayo ngethuba elifanelekiley, umthetho wokonga imali uye waphunyezwa, kananjalo nokwandisa imali iseyinto esigxile kuyo.
7. Inkcitho engangqamenango nomthetho icinyiwe
Omnye wemiba oye washiywa kuthi liBhunga langaphambili ngowenkcitho engangqamananga nomthetho efikelela kwi-R288 million, nenyuke yazakutsho kule mali phakathi ko-2009 ukuya ngo-2014. IBhunga langaphambili liye lazama ukuyicima, kodwa uMphicothi-Zincwadi-Jikelele wayengaxolanga ngokuba kwenziwe uphando na ukuze kubonakale ukuba akukho bani na ekufuneka ephendule, nokuba akukho zimali kufuneka zibuyile na.
IMPAC iye yaqhuba uphando oluphangaleleyo kule nkcitho, emva koko iBhunga laphumezisa ukucinywa kwayo ngokwemigqaliselo yeMFMA.
8. Ukuba baninzi kwabasebenzi
Phezu kwabasebenzi abasisigxina abangama – 800, umasipala ubenabasebenzi bethutyana abangana – 200 malunga nexesha lonyulo. Imali eninzi kamasipala ibisiya kwiindleko zabaqeshwa.
IBhunga liye lanyanzeleka, ngoko, ukuba lithabathe isigqibo esinzima sokuba singakuhlaziyi ukuqeshwa kwaba basebenzi banezivumelwano zethutyana ukuze imali leyo incedise ekuhanjisweni kweenkonzo.
Ukuqinisekisa ukuba umsebenzi uyaqhuba, umqulu wemisebenzi (wezikhundla) uye waphinda waqwalaselwa, kwaye nenani lezithuba zemisebenzi ebalulekilyo lagqalwa ukuze zizaliswe ngo-2017/18.
9. Isicwangciso Sengqesho Sikamakulinganwe
AmaBhunga amabini angaphambili afeda ukuphumeza Isicwangciso Sengqesho Sikamakulinganwe ngokweSolotya 20 Womthetho kaMakulinganwe (Section 20 of the Employment Equity Act – No 55 of 1998). Siye salilandela eli solotya ngokuzimisela, sada saphumeza iEEP yethu yokuqala kwiminyaka esixhenxe nge- 29 July 2017.
10. Iinqwelo ezikwimeko embi
Enye yezinto esathi saziqaphela kuqala emva konyulo loomasipala yimeko eyothusayo yeenqwelo zikamasipala.
Iingxelo zokuqala zabonisa ukuba kwiinqwelo ezingama-220, zine kuphela ezikwimo eyiyo nezisebenza ngokupheleleyo. Iinqwelo ezingama-58 bezingasasebenzi konke-konke, logama ezili-14 besele zisemngciphekweni wokuma unomphelo.
Isicwangciso seminyaka emhihlanu sokutshintsha iinqwelo siyagqityezelwa ukuze sincede ukuqubisana nalo mceli-mngeni.
Inyoba yenziwe liBhunga elitsha kuhlahlo-lwabiwo-mali, iAdjustment Budget ka2016/17 ukuze kuthengwe izigadla ezine. Imali eyi-R8,8 million nayo iphunyeziwe ukuba kuthengwe iinqwelo ezintsha kuhlahlo-lwabiwo-mali luka-2017/2018.
11. Iziqinisekiso zobunini zeRDP
IMPAC ibihleli iphanda ukunikezelwa kweziqinisekiso zobunini ebezisanda kukhutshwa eHankey liSebe Lezokuhlaliswa Kwabantu.
Ziziqinisekiso zobunini ezili-185 ezikhutshwe ngaphandle kwenkqubo yokuqinisekisa abaxhamli ngendlela efanelekileyo, phambi kokuba iBhunga libenokuyinqanda lenkqubo. Ukunikezelwa kweziqinisekiso zobunini kuzakuphinda kuthathise ukugqitywa kophando, naxa sithe sazixolisa ukuba iziqinisekiso zobunini ziya kubaxhamli abafanelekileyo.
12. Ukulwa norhwaphilizo
Umthetho wokulwa norhwaphilizo nobuqhophololo – iAnti-Corruption and Fraud Prevention Policy – iye yaphunyezwa liBhunga.